Al-Bashiir oo ballanqaaday hagaajinta nolosha dadka si wax looga qabto cabashada bannaanbaxayaasha Suudaan - Halbeeg News
Al-Bashiir oo ballanqaaday hagaajinta nolosha dadka si wax looga qabto cabashada bannaanbaxayaasha Suudaan
KHARTUUM (HALBEEG)- Madaxweynaha dalka Suudaan, Cumar Xasan Al-bashiir ayaa ballan qaaday in uu qaadi doono tallaabooyin waaweyn oo loo aayo kuwaasoo uu wax kaga baddalayo nolosha dadka Suudaan, isaga oo ku baaqay in aanan dhag jalaq loo siinin kuwa dacaayadaha raqiiska ah wada bulshadana ku beeraya niyad jabka.
Hadalka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya xilli dalka Suudaan ay ka socdaan dibadbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan dadka Suudaan oo ka cabanaya sicirbararka nololeed ee lasoo gudboonaaday iyaga oo sidoo kalena codsanayay in xukuumadda haatan talada heysa ay meesha banneyso.
Dadweynaha bannaanbaxyada ka wada dalka ayaa ku qeylinayay erayo ay kaga soo horjeedaan dowladda iyada oo ciidamada booliskuna ay dadweynaha ku kala eryayeen suntan dadka ka ilmeysiisa, mararka qaarna adeegsanaya rasaasta nool nool.
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Suudaan madaxweyne Al-bashiir ayaa ammaanay kaalintii laamaha ammaanka iyo sirdoonka dalka ay ka geysteen ilaalinta nabadgelyada muwaadiniinta.
Wararka ayaa intaa ku daraya in madaxweyne Al-bashiir uu kulan la qaatay hoggaanka sare ee laamaha amaanka dalka oo warbixin dhamaystiran ka siiyay xaaladda guud ee dalka xilli uu dalku wajahayo mudaaharaadyo looga cabanayo sicir bararka nololeed iyo burburka dhaqaale ee dalka ka taagan.
Laamaha ammaanka ayaa horay u fuliyay dhowr tallaabo oo ay ku joojinayaan mudaaharaadyada muddada todobaadka ah ka socda Suudaan kuwaasoo ay ka mid ahaayeen bandow lagu soo rogay gobollada qaar.
Xukuumadda Suudaan ayaa mudaaharaadyada ku eedeysay in ay dabada ka riixayaan kooxo fadqallalle doon ah oo dhiirrigelinaya kharbudaadda hantida dalka.
Dhanka kale wasiirka warfaafinta ee Suudaan, Bishaara Jumca ayaa sheegay in xukuumadda Suudaan ay il gooni ah ku heyso xaaladda uu iminka dalka marayo xalna loo raadinayo dhibaatada jirta.
Wareysi uu wasiirku siiyay BBC-da ayuu ku sheegay in madaxweyne Al-bashiir uusan xukunka ka dageynin, dadweynuhuna ay xaq u leeyihiin in rabitaankooda ay ku muujiyaan doorashooyinka dhici doona sanadda 2020-ka, wasiirka ayaa sidoo kale dafiray eedeymaha ah in xukuumaddu ay xirtay baraha bulshada ay ku wadaxariirto sidoo kalena xabsiyada ay u taxaabeen shakhsiyaad mucaarad ah.
Maanta ayaa la filayaa in dalkaasi ay ka bilaabato shaqo joojintii ugu ballaarnayd ee ka dhacda muddadii 30-ka sano ahayd ee uu talada dalka hayay madaxweyne Al-bashiir.
Guddoomiyihii degmada Yaaqshiid oo eedeymo musuqmaasuq shaqada looga hakiyay